I-China elula yaseSitayile esiSiseko esiSi-Wood esinegumbi lokulala Ifenitshala yeBhedi # 0109 yokwenziwa kunye nefektri | Yamazonhome
Uhlobo olulula lweSitayile seNdlu Igumbi lokulala Ifenitshala Ibhedi # 0109
Igama: Ibhedi eqinileyo yomthi
Inombolo yomzekelo: Amac-01 09
Ubukhulu: 1850mm * 2055 * 865mm
Zonke iibhedi zomthi eziqinileyo
Ukukhethwa kwe-oki emhlophe ekumgangatho ophezulu kunamandla okuthwala umthwalo kunye namandla okubamba izikhonkwane kuneminye imithi. I-oki enye yeenkcukacha ezifanayo inokuxhasa imithi emibini eqhelekileyo. Yenziwe nge-oki kwaye ithwala umthwalo onzima. Inzima kwaye intle, isempilweni kwaye inobuhlobo kwindalo, ngaphandle kokukhathazeka ngeengxaki zevumba, kunye nomthwalo ozinzileyo, Ngaba unokuthwala ubunzima bamadoda amadala ayi-8.
Uyilo lokubuya ngasemva
I-headboard yenziwe ngomthi oqinileyo, ngombala ocacileyo kunye nokuzinza okuqinileyo kwebhedi. I-engile yoyilo ihlengahlengisiwe kwi-arc, kwaye uyilo olusondeleyo lwenza ukuba kube lula ngakumbi ukuxhomekeka. Ubume befanitshala mabuphume emzimbeni womntu, xa kuthelekiswa nezinto ezithe tye, Ijika lendalo elisondeleyo kumzimba womntu licace ngakumbi. Umyili uyayamkela indlela yoyilo "ye-scene-style", ukusuka kwi-engile yokuncika, ukuphakama kokufikelela ngokulula, ukuphakama kwebhedi ye-30cm, njl.njl., Ukuvavanywa okuphindaphindiweyo, kunye nenkcazo yokuthuthuzela okuyinyani.
Isokethi esonqenayo kwiphaneli yangasemva
Kukho ibhodi yokugcina ngasemva kwentloko yebhedi enemisebenzi emininzi, enokusetyenziselwa ukubeka iincwadi, iikomityi zamanzi, njl.njl. ibhedi. Isikhokelo sokuqhubekeka kwesangqa entloko kwebhedi, sidibene nobuhle obulula, vula Ihlabathi lifihliwe ngaphakathi.
Zilungiswe kakuhle ibhedi yeenkuni eqinileyo
Umzimba webhedi oqinileyo womthi wamkela amathambo emithi eqinileyo, acwangciswe ngokuxinana ngokuhanjiswa okuphezulu, amandla okuqina kunye namandla afanayo, ulwakhiwo oluzinzileyo, akukho lula ukuwa. Into esiyakhileyo ngumbhede wokuphefumla, amathambo aqulathe i-oki slats, kunye nomoya ophefumlayo, ukunciphisa ukuqokelela kobumanzi, ukuhlaziya kunye nokulala kakuhle ubusuku bonke.
Imizila kaloliwe yokulinganisa yasimahla
Unyawo lwebhedi lunokuxhotyiswa ngokukhululekileyo ngentonga yeenyawo, enokubekwa kwiimpahla zobuqu, izikhafu, njl., Zilula kwaye ziyasebenza. Izitayile ezimbini ezifanayo ziya kukwenzela ubomi bekhaya obahlukileyo.
I-Bold ejikeleze imilenze yeebhedi eqinileyo
Zonke iibhedi zomthi eziqinileyo, akukho nkqubo yokuthambisa, akukho iplanga yeplanga eyahlukeneyo, iinyawo zebhedi eqinileyo, i-angle ejijekileyo echanekileyo, ukuthwala umthwalo ozinzileyo, okunika imvakalelo epheleleyo yokhuseleko. I-17cm ishiye umhlaba, isezantsi asichukumisi uyilo lomhlaba, lula ucocekile kwaye unakekele indawo engezantsi.
Ibhedi yokulala elula yomthi eqinileyo
Nokuba "andinokwazi" ukwabelana ngeengxaki ebomini bakho
"Ndi" ndedwa ndingakusa ekhaya
Ukuzola nokungathathi hlangothi ithoni
Ubeko olukhutshwe ngumbala wokuqala wokhuni
Uyilo lwe-ergonomic ye-103 yedigri yentloko yebhedi
Nciphisa ukudinwa kwemini enye
Egqithileyo I-Oak Wardrobe Ukuthula okungcolileyo kwesilayidi soLoliwe esiTyibilikayo kwiWardrobe Igumbi lokulala Ifanitshala # 0108
Okulandelayo: I-Unitarp edadayo yeYoga Mat yabantu abadala yokuDada Amachibi oManzi e-Yoga nge-Eva engeyiyo iSlip Pad 0389
Nordic Single Solid Wood Isakhelo isofa Creative Fu ...
Isininzi esisebenza ngesofa enye kwigumbi lokuhlala ...
Itafile elula yokujikeleza ngokuQhelekileyo enemilenze, iMini eqinileyo ...
Ifanitshala elula ye-Wood Solid yeGumbi lokuTya leSid ...
Igumbi lokuhlala eliQinisekileyo leFenitshala yokuma kweTV # 0014
Wooden Deluxe Villa Cat House kunye Iveranda kunye Ba ...